Aalado, Drones, Gawaarida iswada ayaa qaabeyn doona Dalxiiska oo kaliya Jamaica
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Technology » Aalado, Drones, Gawaarida iswada ayaa qaabeyn doona Dalxiiska oo kaliya Jamaica
Jebinta Wararka Safarka • Caribbean • Wararka Dowladda • Jamaica News Breaking • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Technology • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Wasiirka Dalxiiska ee Jamaica iyadoo laga fiirinayo aragtida caalamka, mudane, Edmund Bartlett wuxuu la wadaagayaa fikirkiisa xagga sirdoonka farsamada iyo isdhexgalka aaladaha aadanaha mustaqbalka adduunka ee safarka iyo dalxiiska. Ma aha oo kaliya Jamaica inay ka jawaabi doonto sheeko-baraha.
Wasiirka dalxiiska Jamaica Hon. Edmund Bartlett ayaa maanta gaarsiiyey qodobadiisa hadalka CANTO Shirka sanadlaha ah.
Wasiirka ayaa xusay in shaki la’aan, carqaladeynta meel walba ay kuhayaan ee faafa ee COVID-19 ay si weyn uga caawisay dardargalinta xawaaraha isbadalka dhijitaalka ah.
Bartlett wuxuu ku soo gabagabeeyey: Isbeddelku wuxuu sidaas farayaa dhammaan shirkadaha dalxiiska, kuwa yaryar, kuwa yar yar, kuwa dhexdhexaadka ah iyo kuwa waaweynba, si ay u helaan habab ay ku qabsadaan tikniyoolajiyadda dhijitaalka ah, ayna ku horumariyaan qaab dhismeedkooda dijitaalka ah ama ay la kulmaan halista ah in looga tago.
Wasiir Bartlett wuxuu la wadaagay fikradihiisii ​​iyo qodobadii uu ka hadlay ee Guddiga CANTO eTurboNews:
Dhammaan adduunka oo idil, ansaxinta aqallada-guriga iyo amarrada shaqada-guriga, xirnaanshaha xadka iyo tallaabooyinka kale ee adag ee bulshada looga fogeynayo maareynta aafada, waxay wiiqday nidaamyadii iyo hababkii soo jireenka ahaa; taasoo dhalisay in inta badan howlaha waaweyn ee dowladda, ganacsiga iyo howlaha la xiriira loo wareejiyo kanaalada dhijitaalka ah.
Intii lagu gudajiray, aragtida siyaasad dejiyeyaasha, ururada iyo xitaa xubnaha bulshada ee ku wajahan tikniyoolajiyadda dhijitaalka ah waxay ka soo wareegtay shaki, hubin la'aan iyo jahwareer ku yimid qirasho adag in tikniyoolajiyadda dijitaalka ahi ay hadda tahay mid muhiim u ah horumarka bulshada iyo dhaqaalaha.
Muhiimad ahaan, aafadu waxay na bartay in ururada ku guuldareysta inay si guul leh ugu daraan teknoolojiyadda dhijitaalka ah qaababkooda ganacsi ay u badan tahay inay ku guuldareystaan ​​baadi goobkooda si loo hubiyo la qabsiga, deg-degga iyo tartanka xilligii ka dambeeyay COVID-19.
Awoodda ciyaartoy ee waaxda dalxiiska adduunka si ay ula qabsadaan saameynta aafada ayaa shaki la’aan lagu caawiyay teknoolojiyadda dhijitaalka ah.
Jazeera Airways waxay ballan qaaday 28 diyaaradood oo cusub oo A320neo ah
Cusub hey! Kafe Thriving ee Hindiya
Wasiirka Dalxiiska Jamaica oo si weyn uga xumaaday Trelawny...
Ku Cusub shineemooyinka Kaliya - Christmas-ka oo La doortay:...
Delhi Waxay Ku Wajahantahay Tirada Hudheelada 5-Xiddig ee La dhimay